Midrash hal abuur leh
Jawaabta > Qaybta: Barashada Talmudic > Midrash hal abuur leh
EA La weydiiyey 7 bilood ka hor
Marka qudbadu ay abuurto xalakh cusub oo aayad ah, oo ku socota habka ay u abuurto halakhah Dauriyta (Rambaan), maxay reer binu Israa'iil sameeyeen ka hor intaan midrash soo saarin xalalkan? Hadda ka gudubtay dembi Dauriyta (la'aanteed)? Tusaale ahaan, ka hor intaanay dalban in ardayda xikmadda leh la ixtiraamo (halachah ka soo jeeda midrashka "the"), maxay samayn lahaayeen? Iyaga kaliya lama ixtiraami doono oo waxay gelayaan dembi Dauriyta?
Dhab ahaantii. waa maxay dhibku? Mar haddii aysan dalban sharcigan lama yaqaan, sidaas darteedna xitaa kii soo maray waa la kufsaday.
Laakiin xitaa markaa lagama maarmaan ma aha in kuwani ay yihiin dhammaan jiilalka hore. Mararka qaarkood sharciga ayaa la dalban jiray xitaa ka hor, oo kaliya khudbadda aan hayno waa xikmad gaar ah.
EA Waxay u jawaabtay 7 bilood ka hor
Dhibaatadu waxay tahay in tani runtii tahay mid aan macquul ahayn. Halacha Dauriyta waa filashada tooska ah ee Gd. Markaa haddii uu wax iga filayo waxay aad ugu dhowdahay inuu ii sheego, oo dhawr qarni sugi maayo ilaa uu hal xikmad ahi noo yimaaddo oo noo cusbooneysiiyo waxa Eebbe isaga ka filayo.
Anaga oo naga filaya *
Tirgits Waxay u jawaabtay 7 bilood ka hor
Waxaa laga yaabaa in tusaale ka mid ah ikhtiyaarka dambe uu ku jiro xiriirka hoose. Waxaa loola jeedaa in Rabbi Akiva uu dalbaday oo abuuray oo uusan soo xigan dhaqanka Shalach waa meesha loogu talagalay naqdinta Rabbi Tarpon, waxaana soo baxday in Rabbi Akiva ay u badan tahay inuu dhaliyay hallakha la ilaaway.
(Ma xasuusto halka iyo macnaha aan ku arkay in ishaan la keenay, inkastoo aysan caddayn in Rabbi Akiva uu dhaqan dhaliyay balse kaliya in dhaqanku uusan ka hor imaanayn, balse waxay u badan tahay in haddii Rabbi Tarpon uu xasuusto waxa uu leeyahay. arkay oo dhaqanku ma ahayn sidii Rabbi Akiva markaas Rabbi Tarpon )
Michi Waxay u jawaabtay 7 bilood ka hor
Suurtagal maaha in wax walba la qoro (eeg Eruvin XNUMX sababta sharciyada Durban looma qorin). Intaa ka sokow, su'aashaadu waxay ku saabsan tahay khudbadda guud ahaan. Muxuu Ilaahay u doortay inuu Tawreed siiyo Deresh. Ma garanayo tixgelintiisa.
Fikradda labaad ee laga soo xigtay ilaha buugaagta kor ku xusan waxay u muuqataa inay dhab ahaantii u maleeyeen in xitaa abuuraha dalbaday uusan ka hor imaan karin dhaqanka, yacni waxay u malaynayeen in xitaa waagii hore ay yaqaaneen khudbadaha hal-abuurka ah ama ugu yaraan xusuustay gunaanadkooda (ugu yaraan inta badan). Markaa shuruuduhu ma haynin sheegashada “run ahaantii. Ilaa iyo inta aysan dalban, iwm, cid kasta oo soo martay waa la kufsaday "ama ugu yaraan waxay u arkeen inay tahay xaalad degdeg ah.
Buunanka waxaa laga afuufi Dauriyta (ka ab ka ab) iyadoo ay joogaan dadka iyo dagaalka Mitzvah iyo in qaar ka mid ah allabaryo dadweynaha ( cidlada XNUMX: XNUMX-XNUMX). Laga soo bilaabo Tawreed on Rosh Hashana (sanad kasta) iyo on Yom Kippur on Yuval, shofar waa la afuufi, iyo in Macbadka, turumbooyin lagu daro shofar sida ay aayadda Sabuurrada.
Kutubta Ibid. Rabbi Akiva wuxuu dalbaday wacdi aayadaha ku sugan saxaraha aan soo sheegnay oo buunku si sharci ah u buunbuuninayo shuqullo kale iyo wadaaddo leh cillado aan sax ahayn. Rabbi Tarpon waxa uu keenay caddaymo liddi ku ah arrintan in uu arkay adeerkiis Higer oo taagan oo ku faraxsan buunanka. Rabbi Akiva waxa uu ku jawaabay in laga yaabo in uu Daa'uud ku dhajiyay qaraxyo aan ka iman Tawreed (ama ugu yaraan aan ka iman parsha kor ku xusan ee wacdiga jira) laakiin on Rosh Hashana ama Yom Kippur ee Yuval. Rabbi Tarponna wuxuu xasuustaa inuu arkay tan, oo wuxuu ku dhawaaqay: "Shaqadu maaha khayaali. U duceeya aabbahayo Ibraahim oo Aakiwaa kaa soo baxay. Tarpon wuu arkay oo wuu illoobay, Akiva wuxuu dalbaday naftiisa oo wuxuu oggolaaday sharciga. "Qof walba oo kaaga fariista hawlgab noloshiisa."
Rabbi Tarpon wuxuu la yaabay in Rabbi Akiva "isaga dalbaday oo uu oggolaaday sharciga," taasoo la macno ah in Rabbi Akiva uusan keenin wacdi la aamini karo laakiin codsi hal abuur leh. Si kale haddii loo dhigo, waxaan aragnaa in Rabbi Tarpon uu sidoo kale u yimid Deresh Yotzer oo uu ku andacoonayo inaysan run ahayn in waagii hore aysan u dhaqmin sidiisa oo kale.
Tani waxay ka dhigan tahay in Rabbi Tarpon uu u maleynayo, iyo Rabbi Akiva waxay u badan tahay inuu ku raacsan yahay isaga, in aysan suurtagal ahayn (ama aan macquul ahayn) in loo qaato in jiilkii hore aysan garanaynin sharciyada saxda ah. Yacni, waxay halkan ka soo qaadanaysaa in dhammaan gunaanadka khudbadaha hal-abuurka ah (yacni qudbadihii hal-abuurka laftooda) ay ahaayeen kuwii hore loo yiqiin, balse la ilaaway, maantana ciddii wacdi halabuur doonaysaa ha u qaato in uu kaliya soo saarayo wacdi ahaa hore loo yaqaan oo la raaci jiray.
Inkasta oo ay suurtogal tahay in dhaqanku aanu ahayn caddayn buuxda oo Rabbi Akiva ayaa runtii ka cudurdaaran kara (si cidhiidhi ah) in waagii hore aysan ka fikirin wacdigan saxda ah ilaa Rabbi Akiva uu istaagay oo dalbaday.
mikyab Daaran Geeridii Marxuum Prof. David Halvani Weiss (Tiirka 485)
mikyab Daaran Iran ma halkan? Ku saabsan Horumarka iyo Liberalism-ka Sane (Column 483)
Abraham Chaim Daaran Geeridii Marxuum Prof. David Halvani Weiss (Tiirka 485)
Dharka Dananna waa ku habboon yahay Daaran Geeridii Marxuum Prof. David Halvani Weiss (Tiirka 485)
לוי Daaran Iran ma halkan? Ku saabsan Horumarka iyo Liberalism-ka Sane (Column 483)